::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather सबैले गर्ने मलाई थाहा छ, आँफूले के गर्ने मलाई थाहा छैन - कर्ण शाक्य:: Rojgar Manch ::
सकारात्मक सोच सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।
आइतवार, २०७३ पुस १६ गते ०१:१६
कर्ण शाक्य । पर्यटन क्षेत्रको परिचित नाम । सफल व्यवसायी । सोच, खोज र मोजका लेखक । सकारात्मक सोचका अभियन्ता ।
शनिवारको दिन । उनै शाक्यको घरमा आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजना भयो । नकारात्मक टिप्पणीले व्यक्ति, घर, समाज र देश नै आक्रान्त भएको महशुष गरि सकारात्मक सोचको प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
रेडियो श्रोताहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था, लिस्नर्स क्लव नेपालद्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा २० देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका करिव ६५ जना विभिन्न क्षेत्रका युवा, युवतीहरु सहभागी थिए ।
उक्त समारोहमा पर्यटनविद् एवं लेखक कर्ण शाक्य, वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं स्पष्ट वक्ता राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, वरिष्ठ संविधानविद डा. विपिन अधिकारी, वरिष्ठ संचारकर्मी सुशिल शर्मा, अमेरिकाबाट नेपाल आएका राजनीतिकर्मी एवं व्यवसायी दर्शन रौनियार सहजकर्ताको रुपमा हुनुहुन्थ्यो ।
समारोहमा प्रमुख वक्ताको रुपमा कर्ण शाक्यले सकारात्मक सोच सम्वन्धी प्रशिक्षण दिनु भयो ।
उहाँले आफ्नो जीवनका उतारचढावहरुका बारेमा बोल्दै देशको पश्चिम भाग भ्रमण गर्दा अध्यारो महशुष भएको बताउनु भयो । ‘तर म पूर्व जाँदा हिमाल टलक्क टल्केको, लालीगुराँस ढकमक्क फुलेको, चराले गीत गाइरहेको, खोला सुसाइरहेको उज्यालो नै उज्यालो पाएँ । ’ उनले भने ‘मेरो सोच कै उपज नै त रहेछ । ’ सकारात्मक सोचले सकारात्मक कुराको सञ्चार गराउँदो रहेछ । ’
‘नराम्रो दृष्टिकोणले हेरे स्वर्ग पनि नर्क हुन्छ, सकारात्मक सोचले हेर्दा मन भित्रको मांशपेशी पनि सकारात्मक हुन्छ । ’ उनले थपे । ‘ समस्या आएर हामी डराउने होइन । समस्या भनेको विकासको समाधानको पाटो हो । लाइफ विथ आउट च्यालेन्ज भेजिटेवल सरह हो । ’
आफ्नो लेखनको अनुभवलाई समेट्दै उनले भने ‘ सोच, खोज र मोज ९८ प्रतिशतलाई ‘टारगेट’ राखेर बनाउने कोशिश गरे । यहाँ त २ प्रतिशत मात्र गलत मान्छे हुन् । तिनैका कारण हामी पिडा भोगिरहेका छौं । ‘ नेपालमा नीति, नियम, कानून नभएका होइन । देश तव बन्छ जव मान्छेको विवेकले नियमन गर्छ । समस्यालाई केलाएर किन भएन भनेर हेरिन्न । मात्र समस्या खोजिन्छ भने समाधान हुन सक्दैन । उनले भने ‘नेपालीको आयश्रोतमा कमी आएको छैन । न्यरोडका सुन पसल र भाटभटेनीको किनमेल हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । ’
देश किन बन्न सकेन भन्दै उनले प्रश्न गरे ‘देश बन्नलाई आँफूले आँफैलाई चिन्नु प¥यो । प्रजाबाट हामी नागरिक भयौं त भनियो तर नागरिकको भूमिका निभायौं त ? ’
उनले युवाहरुलाई लक्षित गर्दै भने ‘अरु सवले गर्नु पर्ने मलाई थाहा छ, तर आँफूले गर्नु पर्ने केहि थाहा छैन । जुन बेला अरुको मनबाट हेर्न सक्तैन, अरुको कानबाट सुन्न सक्दैन, मनले मनन गर्दैन नि त्यस बेला सम्म नागरिक बनिदैन ।’
समारोहमा अर्का वक्ता वरिष्ठ प्रशिक्षक राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले नागरिक अभियान एक कान...दुई कान...मैदानको अभियान बारे प्रष्ट्याएका थिए ।
‘म खुशी छु, किनभने म संग दुइटा आँखा छन् । यी आँखाले म संसार हेर्न सक्छु । उनले भने ‘यी दुई आँखा तपाई कतिमा बेच्न सक्नुहुन्छ ? लाख...करोड..... हामी आँखा भएका करोडौका मालिक पो हौ त ! ’ ‘ उत्प्रेरणा हुने व्यक्ति पहिलो आँफू नै उत्प्रेरित हुनु पर्छ ।’ श्रेष्ठले भने ‘आँफूमा भएको क्षमता पहिचान गरेर एक प्रतिशत मात्र लागू गर्न सक्यौं भने तपाई जीवनमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ ।’
वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सुशिल शर्माले जातीय द्वन्द्वमा फसेको रुवाण्डाको प्रसंग सुनाउदै नेपालमा पनि असम्भव नरहेको तर्क प्रस्तुत गरे । उनले भने ‘ वीस वर्ष अघिको रुवान्डा अहिले अफ्रिका कै सुरक्षित मुलुकका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अनुहार बदलिएको छ ।’
उनले जातको कुरा गर्नेलाई कटाक्ष गर्दै भने ‘ रुवान्डामा यो जात या उ जात भन्न पाइन्न । म रुवाण्डली मात्र ।’ अनि देश विकास भयो । नेपाल अहिले सोही समस्यामा अल्झेको छ । ’
अमेरिकामा सिनेट पदमा उम्मेदवार भई विश्वभर चर्चित रहेका दर्शन रौनियारले आफ्नो विगत सम्झदै समारोहलाई रोचक बनाए । ‘मैले जीवनमा ठुलो सपना देख्ने गरेको छु । ठुलो सपना देख्यो भने सानो सपना अवश्य पुरा हुन्छ ।’ उनले भने ‘अमेरिका छिर्दा जग्गा वेचेर एक हजार डलर लिएर गएको थिए । अंग्रेजी पनि राम्ररी बोल्न आउदैनथ्यो । सुरुका दिनमा भाँडा माझ्दै पढे ।
उनले आफ्ना संघर्षका दिन सुनाउदै भने ‘दर्जनौ कम्पनीमा जागिरका लागी अन्तर्वार्ता दिएँ । असफलता त्यति नै पटक हात प¥यो । सपना र कडा मेहनतले एउटा कम्पनीमा जागिर पाँए । जुन कम्पनी कै कामको सिलसिलामा संसार घुमे । बुभ्न पाएँ । मलाई विश्वास थियो म सक्छु भन्नेमा । ’
‘काठमाण्डौमा चिया पनि नपकाएको म कसरी ‘सेटल’ भए होला ? हाम्रो आमा, हजुरआमाले केहि गर्न दिनु भएन । संघर्ष अमेरिका हिंडेको दिनबाट नै सुरु भयो । ४ वर्ष दिनको ४ घण्टा मात्र सुतेर जीवनमा संघर्ष गरे । जसले सफलता हात पा¥यो । ‘ म अमेरिका जाँदा सबैको नकारात्मक सोच थियो । परिवार भित्र पनि सहयोग थिएन । तर विस्तारै परिवर्तन भयो । समाज बुभ्ने क्रममा अमेरिका कै नीति राम्रो छैन भन्दै विभिन्न स्टेट गएँ । उम्मेदवार भए, ११ हजार मत प्राप्त भयो । ’ उनले थपे ‘ कुनै पनि बैठकमा म पहिला पुग्थे, अन्तिममा निस्कन्थे । ’
समयको पालना नभएकोमा गुनासो गर्दै रौनियारले भने ‘नेपालमा त कुराइन्छ । हुँदा हुँदा अमेरिकामा समेत नेपालीको कार्यक्रमा ढिलो गए हुन्छ भन्ने सोच छ । अमेरिकनको कार्यक्रम भने जो पनि समयमा पुग्छन् । ’
उनले आँफू नेपाल फर्केको सन्दर्भ जोड्दै भने ‘यहाँ भिजन भएको नेता देखिन । ’ अव म नेपालमै राजनीति गर्छु ।’
समारोहमा संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले भने ‘ओपिनियन छ तर अर्गनाइजेशन भयो भने काम अगाडी बढ्ने छ ।’ उनले भने ‘ विवेक जान्न नियम जानिरहनु पर्दैन । ’
कार्यक्रमको अन्त्यमा लिस्नर्स क्लव नेपालका अध्यक्ष हरिराम पौडेलले छोटो समयको सूचनामा यस उल्लेख्य सहभागिता भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रियात्मक शैलीमा संचालन भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले सकारात्मक सोचको विकास गर्न यस्ता कार्यक्रमहरु महत्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिए ।